Oovimba be-Brexit-Funda ukurhweba
I-Brexit Stalemate njenge-Sterling Loosens, i-EURO izinzile ekukhululweni kwe-ECB
Ukuhlaziywa: 11 Disemba 2020
USterling waphinda wabuya emva kokuba intlanganiso yaseBrussels iphele kungekho nto ngaphandle kwamazwi athi i-UK kunye ne-EU zisaqelelene. Ngeli xesha, i-euro iyacacisa njengoko umgaqo-nkqubo we-ECB kulindeleke ukuba uhlaziywe.
I-GBP / i-USD inyuse ilahleko yayo, iwela ezantsi ngokutsha kwe-1.3184, elona nqanaba lisezantsi ukusukela ngo-Novemba 18. USterling ngaphambili wabethwa luloyiko lokungabikho kwesivumelwano emva kokuba uMongameli weKhomishini yaseYurophu u-Ursula von der Leyen ethe amathuba okuba kungasetyenziswanga ngaphezulu kokufikelela kwisivumelwano. Inkulumbuso yase-Bhritane u-Boris Johnson uthe ngoLwesine ukuba kukho “Amathuba aphezulu” Ukushiya i-EU ngaphandle kwesivumelwano.
Okubiziweyo “Isidlo Sangokuhlwa Sokugqibela” phakathi kwe-Nkulumbuso yase-Bhritane u-Boris Johnson kunye ne-Khomishini ye-European President u-Ursula von der Leyen iphele ngaphandle kwenkqubela phambili. Izikhundla zawo omabini amacala zihleli “ziqhelelene”, kwaye umhla omisiweyo wokuqhubeka kothethathethwano umiselwe kule veki.
UAndrew Bailey, iRhuluneli yeBhanki yaseNgilani, uqaqambise ukusikelwa umda kwinto engenziwa liziko lakhe ukunciphisa ifuthe ekupheleni kwenguqu yeBrexit. UBailey wongeze ukuba umsebenzi kumazinga enzala amabi usaqhubeka. I-Bhanki yaseNgilani iya kudibana kwiveki ezayo ukubhengeza isigqibo sayo sonyaka.
Ukuzinza kwe-EURO ekukhutshweni kwe-ECB
I-euro yomeleze emva kokuba i-ECB yandise kwaye yandisa i-PEPP njengoko kulindelwe ziimarike.
UMkomishinala weeNkonzo zezeMali wase-EU uMairead McGuinness uthe ngokwahlukeneyo: “Namhlanje silungiselela izicwangciso zexesha likaxakeka, zichaze ngokuthe ngqo kwaye zijolise kakhulu, ukuqinisekisa ukuba kwimeko 'yokuphazamiseka kwesivumelwano' kumacandelo asemngciphekweni afana nezothutho, ukuhamba ngenqwelomoya, njl. Njl. Ezi zicwangciso zenzelwa ukuba zihlale zinxibelelana. "
I-ECB namhlanje ibhengeze iphakheji yamanyathelo, kubandakanya ukwandiswa kunye nokwandiswa kweNkqubo yokuThengwa kweNgxakeko yePandemic (PEPP). La manyathelo ajolise kuwo “Ukugcina iimeko ezincumisayo zokuxhasa ngemali ngexesha lobhubhane, ngaloo ndlela sixhasa ukuhamba kwemali-mboleko kuwo onke amacandelo ezoqoqosho, ixhasa imisebenzi yoqoqosho kunye nokuqinisekisa uzinzo lwamaxabiso aphakathi.”I-ECB ikulungele "Ukulungele ukulungelelanisa zonke izixhobo zalo ukuba kukho imfuneko".
tags Brexit, Euro, Pound Sterling
I-Brexit: Yenza okanye uqhekeze imeko njengoko i-GBP iyehla ngokukhawuleza, iYen, iSwitzerland ngokuPhakamileyo
Ukuhlaziywa: 7 Disemba 2020
Iponti yaseBritane ithengisa kakhulu namhlanje njengoko umngcipheko we-UK ushiya i-EU ngaphandle kwesivumelwano uyakhula kwaye akuyi kubakho mpu melelo kuthethathethwano olungapheliyo. Ngelixa kwenziwe inkqubela-phambili ukusukela kumjikelo wokugqibela weengxoxo phakathi kothethathethane oyintloko we-Brexit u-David Frost kunye nomlingane wakhe wase-Europe u-Michel Barnier, khange bayiphelise yonke iyantlukwano.
I-Sterling okwangoku ibuthathaka njengoko iingxoxo zeBrexit zisaqhubeka kwaye ixesha lihamba. Kubikwe inkqubela ekulobeni. Kodwa imibuzo malunga nenqanaba lokudlala iya kuhlala isonjululwa. Iidola kunye neemali zezorhwebo zixutywe ne-euro.
I-franc yaseSwitzerland yeyona inamandla ngoku, ilandelwa yi-euro kunye ne-yen. Idola isadidekile. I-yen kunye ne-franc yaseSwitzerland bathengisa ngaphezulu kancinci njengoko ama-stocks aseAsia abuyela umva kwirali yamva nje. Ngelixa amanani okuthumela ngaphandle e-China abonakala omelele, ukukhula kokungenisa ngaphakathi kuye kwambalwa.
Ngokobuchwephesha, i-yen inokuba nomdla wokubukela phakathi evekini kwaye kude kube sekupheleni kwenyanga. I-EUR / JPY ilahlekelwe ngamandla ngaphambi kokuxhathisa kwe-127.07 de ikwazi ukuphinda iqhubeke kwakhona. Ngokunjalo, isibini se-GBP / JPY sibambe ezantsi kwe-142.71 ukumelana.
I-NZD / JPY yayiyeyona mali yomeleleyo, isaphula i-71.66 ukumelana kwangoko ngo-Novemba. I-CAD / JPY izama ukubamba kwaye yoyise ukuxhathisa kwi-81.42. Kodwa i-AUD / JPY ibambe kakuhle ngezantsi kwe-78.46. Masibone ukuba i-yen umnqamlezo ekugqibeleni ulungelelana omnye nomnye njengoko i-uptrend iqala kwakhona. Okanye ukubuyela umva kwi-EUR / JPY, GBP / JPY, kunye ne-AUD / JPY kuya kutsala okuseleyo.
Imbonakalo ye-GBP / ye-USD: I-Brexit Talks Hurt Sterling
Iponti yaseBritane ithumele ukwehla kwexabiso ngokubhekisele kwidola yaseMelika ngexesha leseshoni yanamhlanje yokurhweba kulandela iingxelo zokuba i-UK ilungiselela ukuphuma kwiingxoxo eziqhubekayo zeBrexit.
Isidima siwohlokile emva kokuba iNkulumbuso yase-UK u-Johnson ethe i-UK ikulungele ukukhupha iingxoxo ze-Brexit kwaye yagqabaza kwigosa eliphezulu le-EU ukuba akunakwenzeka ukuxelela ukuba kuya kubakho isivumelwano sezorhwebo phakathi kwe-EU ne-UK.
Ukwehla okuzinzileyo ngezantsi kwenqanaba le-1.3300 kunokubangela ukuhla kwexabiso eliya kwindawo yexabiso le-1.3000. Ukuba i-GBPUSD ihlala ingaphezulu kwe-1.3300, uxinzelelo oluphambili luya kufumaneka kwi-1.3410 nakwi-1.3550. I-GBPUSD i-bearish kuphela xa ithengisa ngaphantsi kwe-1.3300, ngenkxaso ephambili kwi-1.3160 ​​kunye ne-1.3000.
tags Brexit, IGBP, Yen Japanese
Isalathiso sedollar sijongana neNdawo yokuXhasa emva koQeqesho olusezantsi
Ukuhlaziywa: 6 Disemba 2020
Isalathiso sedola ekugqibeleni saphinda saqala phakathi ukuya kuthi xhaxhe nge-102.99 kwiveki ephelileyo kwaye sabetha esisezantsi se-90.47. Ngelixa i-avareji yokuhamba kwemihla ngemihla ibonisa iimpawu zokukhawulezisa ukuhamba ezantsi, i-RSI ibonisa ukuba i-DXY sele igqithisile. Kukho ithemba lenkxaso kwinqanaba lobuchwephesha abangama-90, elihambelana noqikelelo lwe-61.8% ukusuka kwi-102.99 ukuya kwi-91.74 ukusuka kwi-94.30 ukuya kwi-90.00.
Ukuthengiswa kweedola bekungumxholo ophambili kwiimarike zotshintshiselwano lwangaphandle kwiveki ephelileyo. Ngokufika kwezitofu zecoronavirus, uqoqosho lwehlabathi lubonakala luza kubuyela esiqhelweni kunyaka olandelayo, ngaphandle kwezimvo ezilumkileyo ezivela kwiibhanki eziphambili.
I-yen inokubonakala imbi kakhulu kunedola, kodwa isabambe ngaphezulu kwenkxaso yexesha elifutshane ngokuchasene neyona mali iphambili. I-loonie yayiyeyona yomeleleyo, inyuselwa kukuqhekeka okuphezulu kumaxabiso eoyile kunye nedatha yengqesho eyomeleleyo. Izikhundla ezilandelayo ezinamandla zilandelwa yi-euro kunye ne-franc yaseSwitzerland, ngelixa i-pound sterling yayingekude kakhulu. Iidola zase-Australia nase-New Zealand ziphele ngeendlela ezahlukeneyo, ngelixa idola lase-Australia liye lala ukunyuka kwengxwabangxwaba ne China.
IVeki engaphambili: I-Brexit, i-Vaccine, i-GBP / i-USD
Abatyalomali bamkele inyathelo laseMelika ukuya kwibhiliyoni yeedola ezingama-908 zeedola zoncedo kunye nomthetho oyilwayo opheleleyo wokuthintela ukuvalwa kukarhulumente.
Idola yase-US ekhuselekileyo yayinamandla amakhulu, iwela ngaphezulu kweminyaka emibini kunye ne-yen yaseJapan yokunciphisa umngcipheko. I-euro yenyuka njengoko iponti yase-Bhritane yayithandabuza kwi-Brexit headlines eqhubekayo.
Amaxabiso egolide anyukile njengoko i-oyile ekrwada yathatha ithuba lesivumelwano se-OPEC + ukuqala ukusika ukusika ukuqala ngoJanuwari kungaphantsi kokulindelweyo.
Ngokusondela kokugqibela kweBrexit, itshathi yemihla ngemihla ye-GBP / USD ikwindawo ebonakalayo. Isenzo sexabiso ngolwesiHlanu sibonisa ukuba esi sibini sivule kufutshane ne-lows yemihla ngemihla, sahlanganisa i-100 pips kwindawo entsha yamva nje, kwaye asilela ukuvala iipipsi ezininzi ezantsi kunokuba bezivule nge-1.3420.
Ukunikezelwa kwesivumelwano seBrexit, intetho eqhubayo malunga nezitofu zokugonya, kunye nenkuthazo entsha, iimarike zingazinza kule veki. Ukungazinzi kuya kwamkeleka kwintengiso njengoko inika abathengisi ukhetho oluninzi.
tags Brexit, Ixabiso le-US Dollar (DXY), Igciwane
Iponti yeSterling Plunges kuXinzelelo lweBrexit kunye nokungaqiniseki
Ukuhlaziywa: 29 Novemba 2020
Iponti yaseBritane igqibe kwindawo yesithathu, kwaye ukuthengisa kade kufanelekile ukuba kuchazwe. Ikloko ikhathaza njengoko ixesha lokutshintsha kweBrexit liphela kwinyanga enye kamva. Kwiintsuku ezizayo, kunokubakho intshukumo ebukhali yeponti, ngokukodwa ngokuchasene nezinye iimali ezinkulu zaseYurophu.
Iiponti ezibalaseleyo zinokuthi zixhomekeke kukungazinzi okuphezulu kwiintsuku ezizayo, njengoko intetho kunye ne-EU uMichelle ngoku eseLondon kangangeentsuku ezine zeengxoxo zeBrexit. Kwinyanga enye phambi kokuphela kwexesha lotshintsho, umsantsa obalulekileyo uhleli phakathi kwe-UK ne-EU. Ngayiphi na imeko, ukubhengezwa kwesivumelwano okanye ukwaliwa kwayo kuya kubangela ukuqhubeka kokuhamba kwesikiti.
Ukunyuka kwamaxabiso kunokunyuka ngaphezu kokuba bekulindelwe ngethemba lokuvuseleleka ngokukhawuleza kwezoqoqosho okubangelwa yinkqubela phambili kuphuhliso lwesitofu sokunyanga i-coronavirus kunye nesikhuthazo esikhulu, utshilo u-Haldane oyintloko yezoqoqosho eBhanki yaseNgilandi kwintetho yakhe kwi-University College London webinar ngoMgqibelo.
Phakathi kwe-Brexit Woes GBP / USD Eyes Ubuthathaka obuqhubekayo
I-GBP / i-USD isika inzuzo yenyanga, iyancipha kwiveki ephelileyo ukuphinda iphinde ibuye i-1.3300. Esi sibini silindele impendulo yeseshoni yaseAsia kwiindaba zokugonya zeBrexit kunye ne-COVID zamva nje ngoMvulo. Ngelixa ubuthathaka ngokubanzi kwidola yaseMelika kunye nethemba lokugonya i-coronavirus (i-COVID-19) iye yakhuthaza i-Cable ngo-Novemba, iinkunzi zeenkomo ziqala ukulumka kade ngenxa yokungaqiniseki kweBrexit.
I-rally ye-GBP / USD ukusuka kwi-1.2675 kwiveki ephelileyo yandiswa ukuya kwi-1.3397 kodwa yabuya emva koko. Umkhethe wokuqala awuthathi cala kule veki. Kwinzuzo engaphezulu kwe-1.3397, isibini siya kujolisa kwi-1.3482 ephezulu. Ikhefu lokuthatha isigqibo sokuphakama kwe-1.3482 iya kuqhubeka nazo zonke izibonelelo ezivela kwi-1.1409.
Ukuqhubekeka kwirali ukuya kwi-61.8% yoqikelelo lwe-1.1409 ukuya kwi-1.3482 ukusuka kwi-1.2675 ukuya kwi-1.3956 emva koko kuya kufuneka kubonwe. Kwelinye icala, ikhefu lenkxaso ye-1.3195 liya kuguqula i-bias ibuyele ezantsi ukuze iqhubeke nokudityaniswa ukusuka kwi-1.3482 ngomnye umlenze owayo.
tags Brexit, Pound Sterling
Iingxaki zeBrexit Zilinganise ubunzima bepound Sterling esezantsi njenge-EU kunye ne-UK Umahluko uyaqhubeka
Ukuhlaziywa: 27 Novemba 2020
Sterling ityhila ezantsi namhlanje kwimo ezolileyo yeholide. Abathengisi babuyele kulawulo njengoko kubonakala ngathi akukho ndlela yakuphuma kwisithintelo kwiingxoxo zorhwebo zaseBrexit. Kwaye ixesha liyaphela. Ngokubanzi, i-yen kunye nedola zihlala zizezona zimbi zeveki ngenxa yethemba ngokubanzi malunga nezitofu zokugonya ze-coronavirus. Idola yaseNew Zealand ihlala inamandla, ngelixa idola yase-Australia ingayinanzi imisebenzi yaseTshayina kwaye ihleli kwindawo yesibini.
Uthethathethwano lwentloko ye-EU ye-Brexit uMichel Barnier uqinisekisile ukuba uya eLondon ngokuhlwanje ukuya kuqhubeka neengxoxo zorhwebo ne-UK kwimpelaveki. Kodwa waqaphela ukuba "Ukwahluka okufanayo kubalulekile kuhlala". Igosa elingachazwanga ngegama le-EU lithe uBarnier uxelele oonozakuzaku belizwe ukuba "Izikhewu kwinqanaba lokudlala, ulawulo, kunye nokuloba kuhlala kukhulu"
Kwicala lase-Bhritane, u-Nkulumbuso u-Boris Johnson uthe: "Kukho umahluko obalulekileyo nobalulekileyo osafuna ukoyiswa, kodwa siyaqhubeka ukwenza njalo." Wongeza: Ubukho besivumelwano buxhomekeke ikakhulu kubahlobo bethu nakumaqabane e-EU - kukho isivumelwano ekufuneka senziwe ukuba bayasifuna. ”
Iponti yeSterling yoxinzelelo koVuselelo akukho Deal Brexit
I-GBP / i-USD ibethe amanqanaba amatsha njengokuqiniseka malunga nogonyo oluzayo e-UK kunye nokutshintsha okuthe tye kwe-US kugqithise ukungaqiniseki kwe-Brexit kunye nedatha yase-US. I-Brexit, i-Powell, kunye ne-nonfarm payrolls ithembisa ukuqala kwesiphithiphithi ukuya ku-Disemba. Nangona kunjalo, Inkulumbuso yase-Bhritane u-Boris Johnson uqaphele ukuba umahluko obalulekileyo nobalulekileyo usahleli ukusonjululwa ngexesha lothethathethwano, kwaye wathi i-UK ingaphumelela ngaphandle kwesivumelwano.
La magqabantshintshi akhokelela kwilahleko kwi-GBP / USD phantse yeepips ezingama-40 kwimizuzu nje embalwa. Ngaphandle koko, i-FTSE 100 yase-UK ilahlekelwe ngumfutho ngenxa yokuqaphela imeko yentengiso kwaye kutshanje ilahlekelwe yi-0.5% ukuya kwi-6,331. Kwelinye icala, isalathiso sedola yaseMelika sihlala sizolile ngolwesiHlanu, sivumela i-GBP / USD okwethutyana ukunciphisa umda welahleko.
I-GBP / i-USD iyaqhubeka nokuphulukana namandla, njengoko kubonwe kwiiyure ze-4 kamva, kwaye i-intraday bias ayithathi cala. Ukuba inyuka ngaphezulu kwe-1.3397, isibini esiya kuqala sijolise ekuchaseni kwi-1.3498. Ikhefu lokuthatha isigqibo sokuphakama okuphezulu kwe-1.3482 liya kuqhubeka kwakhona ngokuzuza ngokupheleleyo ukusuka kwi-1.1409. Ukuqhubekeka kwirali ukuya kwi-61.8% yoqikelelo lwe-1.1409 ukuya kwi-1.3482 ukusuka kwi-1.2675 ukuya kwi-1.3956 emva koko kuya kufuneka kubonwe.
tags Brexit, EU, GBPUSD, Pound Sterling
Iimeko zeLackluster zeMarike zande phakathi kokunqongophala kweCatalyst eyomeleleyo
Ukuhlaziywa: 19 Novemba 2020
Kwakungekho msebenzi mncinci kwiimarike zezimali ngoLwesithathu, ezona zibini ziphambili zidibanisa kwaye isitokhwe sitshintsha phakathi kwenzuzo nelahleko.
Imvakalelo yentengiso yahlala ibambekile phakathi koloyiko lokuqhambuka kwe-coronavirus kunye nethemba lezitofu zokugonya. Inkqubo yokhathalelo lwempilo yase-US iphantsi koxinzelelo njengoko amatyala amatsha eqhubeka nokunyuka kwaye amanyathelo amaninzi othintelo abhengeziwe kwilizwe liphela. Okokugqibela kukuba inani losulelo olutsha eNew York lifikelele kwinqanaba apho abasemagunyeni bengavala izikolo.
Umongameli wase-US uDonald Trump uqhubeke nokusebenzisa imidiya yoluntu ukuthetha ngobuqhetseba bonyulo. Nangona kunjalo, amabango abekwe phambili ukuza kuthi ga ngoku khange ahoywe, kwaye amanye awo akhatyiwe. Ukungazinzi kwezopolitiko kongeza uxinzelelo kwidola, nangona uJoe Biden kunokwenzeka ukuba abe ngumongameli wase-US wama-46.
Intlanganiso yangaphambili yeFederal Reserve System khange ibenazo iziphumo ezininzi kwintengiso yotshintshiselwano lwangaphandle, kuba ngexesha lonyulo lwase-US uxinzelelo lwalukwenye indawo. Intlanganiso elandelayo ye-Fed iya kubaluleka kwiimarike ezinikezwe iphakheji yokufumana imali engafumanekiyo, kwaye kungekudala sinokubona ukutshintshela ekunciphiseni ubungakanani.
Ukugxila kukaPowell kwi-COVID kunye nesidingo sokonyusa ezemali kugxininisa ezinye zeengxaki ezinxulumene ne-dollar yase-US ebuthathaka egxothwa kumanqanaba akhoyo.
Ukunyuka kwamaxabiso eBritane kugqitha kulindelo
Amaxabiso okunyuka kwamaxabiso sisalathiso esibalulekileyo somsebenzi wezoqoqosho okanye ukunqongophala kwawo. Ixabiso lentengo e-UK ngo-Okthobha lenyuka ukusuka kwi-0.5% ukuya kwi-0.7%. Oku kudlula uqikelelo olwamkelwe ngokubanzi lweepesenti ezi-0.5, kwaye abatyali zimali abonelisekileyo bayayixabisa iponti. Imali ifumene malunga ne-1% kule veki kwaye isondela kwiveki ephezulu ye-10 ye-1.3313.
Isalathiso sexabiso sabathengi sibonise imeko efanayo: ukukhula kwakuyi-1.5% xa kuthelekiswa nexabiso langaphambili le-1.3%. Eli nani lingaphezulu koqikelelo lwe-1.3%.
Ngokubhekisele kwi-Brexit, uMkomishinala wezoRhwebo we-EU uValdis Dombrovskis uthe ngoku bakumzuzu wokugqibela ukugqiba isivumelwano sentengiso ne-UK. Ngaphandle koko, unobhala wezorhwebo wase-UK u-Alok Sharma uthe "kuninzi ekufuneka kwenziwe" malunga neBrexit, esongeza ukuba i-EU "kufuneka iqonde" ukuba i-UK lilizwe elizimeleyo. Nangona kunjalo, abatyali mali basenethemba lokuba i-UK kunye ne-EU bazakubetha intengiselwano.
Amaxabiso eoyile ekrwada agcina ithoni yawo elungileyo kwaye abonisa ukuzuza okuphakathi kwe-intraday, nge-WTI ejikeleze i-42 yeedola emgqonyeni ekupheleni kosuku. Kwelinye icala, amaxabiso egolide ehle kancinci, efikelela kwi- $ 1,874 ngetoni nganye.
tags Brexit, Covid-19, Indawo yeFed, Ukhetho lwaseMelika
I-Dola ithatha ukuphefumla emva kwedatha yeJob njengoko i-US Stimulus Saga iqhubeka
Ukuhlaziywa: 22 October 2020
Idola liyachacha kwangoko kwiseshoni yase-US kwidatha yengqesho ebhetele kunalindelweyo. Nangona kunjalo, okwangoku kuhlala kubuthathaka ngeveki. Umfutho wokuthenga idola awukaqinisekisi ukubuyela umva. Okwangoku, kukho izinto eziguqukayo kwimarike yotshintshiselwano lwangaphandle, ngokuwa okumodareyitha kunye ne-euro. Iimarike zentengiso ziphawula ixesha, zilinde imicimbi emitsha, ngakumbi ingxoxo kamongameli yamva nje ngaphambi konyulo lwase-US. Izivuno zikaNondyebo weHlabathi zihlala zingatshintshanga kuluhlu olunqamlezileyo.
Isaga yenkuthazo yaseMelika iyaqhubeka. USomlomo weNdlu uNancy Pelosi uthe abaDemokhrasi babenjalo “Sele eza kusondela” kwisivumelwano esonyusa i-coronavirus kunye ne-White House, kodwa ikwalumkisile ngebhili enokuthi ithathe ixesha lokuba iCongress idlule.
Idola iphinde yenyuka ngokuchasene nabakhuphiswano bayo abakhulu, ngelixa iWall Street ivale ngaphezulu. Iibhondi zikarhulumente ziye zehla kwaye i-US Treasury isivuno sayo sabetha phezulu kwiiveki ezininzi.
I-EUR / i-USD yehla yaya kwi-1.1820 kwaye i-GBP / i-USD yatsalwa ngaphantsi kwe-1.3100. Iimali ezithengiweyo zorhwebo zithumele iinzuzo ezimbalwa ngaphezulu koogxa bazo baseMelika.
I-Sterling ithatha ukuqaqamba
Uthethathethwano oyintloko e-EU uMichel Barnier ufikile eLondon ukuze aqhubeke neengxoxo zorhwebo emva kwempazamo yeveki, exhasa iponti. U-Barnier kunye nomlingane wakhe wase-Bhritane u-David Frost bazimisele ukubandakanyeka kuthethathethwano olunamandla, nangona bobabini bevumile "Izithuba ezibalulekileyo" zihlala ziyindawo ezinobunzima, ezinje ngamalungelo okuloba kunye nenqanaba lokudlala, phantsi kweemfuno ze-EU.
Idola ibuyela ngokulinganayo namhlanje kwiseshoni yaseAsia kodwa iyonke ihlala ibuthathaka, kuba sisona sibonakaliso sibi ngeveki.
Abathengisi babonakala ngathi bathatha umoya, okwangoku, belinde uphuhliso olutsha malunga nokukhuthaza imali, kunye nengxoxo kamongameli yamva nje phambi konyulo. Okwangoku, ezona mali zikhulu zaseYurophu zezona zibalaseleyo kule veki: kuqala iponti entle, emva koko iyuro. Iimali zorhwebo azizukuxhamla lukhulu kuthengiso lwedola.
I-GBP / USD ngoku ithengisa nge-1.3092 kwaye iphantsi malunga ne-0.36% ngexesha lokubhalwa kwemicimbi yeBrexit. Ixabiso litshintshile ngoLwesine phakathi kwe-1.3070 kunye ne-1.3152, ibuyisa i-rally elungileyo kwi-Brexit njengoko ihla isiba ngasekupheleni kweveki.
tags Brexit, ICoronavirus (COVID-19), Euro, KwiDola yaseMelika, Umthetho osayilwayo waseMelika
Ukuntywila kwiDola kwiphakheji yokukhuthaza njengoko iNgxoxo yeBrexit iqhubeka
Ukuhlaziywa: 21 October 2020
Ngolwesithathu, idola iqhubekile yaphulukana nomhlaba ngokuchasene nazo zonke izimbangi zayo eziphambili. Ithemba lephakheji yokukhuthaza i-US iyigcine kwintengiso-ngaphandle kokungasebenzi kakuhle kwesitokhwe njengoko ii-indices zaseYurophu zivaliwe ngombala obomvu, ngelixa ii-indices zase-US zikwazile ukuthumela inzuzo encinci ye-intraday kodwa zavala usuku kubomvu.
Uthethathethwano phakathi kukaSomlomo weNdlu uNancy Pelosi kunye no-Nobhala Wezemali wase-US uStephen Mnuchin luqhubekile ngaphandle kwesivumelwano. Ukulibaziseka kweengxoxo kuchaphazele iimvakalelo zentengiso ngaphambi kokuvalwa.
Igagasi lesibini le-coronavirus labetha iYurophu nzima ngokwaneleyo. Ixesha lokufika ekhaya lifundwa kumazwe ahlukeneyo, njengoko irekhodi lamatyala amatsha libhaliswe eSpain, e-Itali nase-UK. Ixesha lokufika ekhaya kunye namanyathelo ongezelelweyo okuthintela aphantsi kokufunda. U-Chancellor wase-UK u-Rishi Sunak uzokutyhila ipakeji yesine ye-COVID-19 yenkxaso.
I-COVID-19 Imeko yeYurophu kunye ne-EUR / USD Outlook
Ingxaki yezempilo ye-COVID-19 ibisothusa ngokwembali kuqoqosho lwe-eurozone kunye nenkqubo yebhanki. Ubuthathaka boqoqosho lomntu ngamnye, njengoqoqosho lwase-Itali, ibe sisihloko esisekude kwiimarike kunye nengxaki kwi-euro nakwipolitiki yaseYurophu. Urhwebo lwakutsha nje lubonakalisile ukuba nzulu kokunyuka kwamatyala amatsha e-COVID kumazwe ahlukeneyo aseYurophu.
Nangona kunjalo, ngaphandle koku, i-euro ikhawulezile, ifikelela kwinqanaba eliphezulu lenyanga eli-1.1880 njengoko idola yaseMelika iwela kumathemba okukhulisa uqoqosho. Nangona kunjalo, ngokobuchwephesha, ithemba le-euro alikhangeleki njengemeko yokusasazeka kwintsholongwane, kungekuphela kwezoqoqosho kodwa nakwipolitiki yaseYurophu.
Abatyalomali bafumene isiqinisekiso sokuzibophelela kwe-ECB ekwenziweni lula nakwiNgxowa-mali yokuBuyisa i-EU. Oku kunyuse ithemba lokuba abezopolitiko base-Yuropu ekugqibeleni bathathe amanyathelo amancinci ukuya kulwakhiwo lwemali oluhambelanayo.
Nangona kunjalo, idatha yeCFTC enezikhundla ezomeleleyo ze-EUR kunye ne-wave yesibini ye-covid-19 inokuwela kwimali enye. Izidingo ezitsha zenkxaso-mali zinokubangela impikiswano entsha malunga nenkxaso yezemali, kwaye kulapho irali ye-euro ekhuthazayo inokungaphumeleli. Ngokuchasene nale mvelaphi, amagosa e-ECB akazifihli iingqikelelo zabo, belungiselela intengiso yezenzo ezithe vetshe kwicandelo lomgaqo-nkqubo wezemali kwiinyanga ezizayo.
tags Brexit, ICoronavirus (COVID-19), YeEUR / USD, iYurophu, I-European Central Bank (ECB), KwiDola yaseMelika
Iimakethi zilindele amaxabiso amabi ngakumbi njenge-Euro kunye ne-Swiss Franc Rally
Ukuhlaziywa: 20 October 2020
Amandla e-euro kunye ne-Swiss franc iyaqhubeka nokulawula iimarike namhlanje. Oku ngaphandle kokunyuka kwenani lamatyala osulelo lwe-coronavirus eYurophu. Okwangoku, iintetho zeBrexit zihlala zibambekile. Abarhwebi babheja ukuba iibhanki eziphambili zehlabathi ezifana neRBA kunye neBhanki yaseNgilani kungekudala ziya kujoyina iklabhu yenqanaba lenzala. Okwangoku, ezibuthathaka kuzo ziyi-Australia kunye ne-Kiwi. Idola kunye neSterling zixutywe.
Ngokobuchwephesha, ukumelana ne-1.1830 ye-EUR / USD kunye ne-125.08 yokumelana ne-EUR / JPY iya kutsala umdla kwiseshoni yaseMelika. Ikhefu liya kuvula indlela eya kwiindawo eziphakamileyo ze-1.2011 kunye ne-127.07. Ukuxhathisa kwe-0.9162 kwi-EUR / GBP kukwabalulekile, kwaye ikhefu liya kubonisa ukugqitywa kokutsalwa kwakhona ukusuka kwi-0.9291 kwaye kukhokelele ekubuyiseleni oku phezulu.
Okokugqibela, ngelixa uxhathiso lwe-1.5738 lusesekude, ikhefu liya kuqinisekisa ukuba i-EUR / CAD igqibe ipatheni yokulungisa ukusuka kwi-1.5978. Siyayibona i-EUR / CAD emva koko ukuya kwi-1.4991 ephezulu ukuze iphinde iqale i-rally yonke ukusuka kwi-1.4263 kamva.
Ukutya okusemngciphekweni kuyomeleza i-Euro
Imali enye yomelezelwe usuku lwesithathu ngokulandelelana, inyuswe yimeko yentengiso entle emva kokuba iimarike ezinkulu ze-equity ziphinde zavela kuvulo olubuthathaka eYurophu.
Ngaphandle kokukhutshwa kwe-macroeconomic efanelekileyo, abatyali mali bahlala benethemba nangona kungekho nkqubela phambili kwiintetho zokukhuthaza ukusasazeka kwe-coronavirus e-United States. Nge Wall Street ekhula ngaphezulu kwe-1%, indawo ekhuselekileyo yedola yaseMelika ilahlekelwa ngumhlaba ngokuchasene neemali ezinobungozi.
E-Yuropu, i-euro yayingenazintloni kukuthintelwa kothethathethwano lwezorhwebo kwi-Brexit kunye nokusasazeka kwe-coronavirus: I-France ibike ingxelo yokulaliswa esibhedlele, kwaye i-Ireland yabeka imiqobo eqatha.
tags Brexit, Euro, Swiss Franc, KwiDola yaseMelika
I-USD iyawohloka kuVuselelo oluVuselelweyo lweThemba njengee-Spike ze-Euro
Abatyalomali baqalise iveki ngokujonga ngokusondeleyo kwi-US stimulus kunye ne-Brexit, kodwa bobabini babonisa ukuba akukho nkqubela phambili njengoko iseshoni yase-US isondela esiphelweni.
Idola kunye ne-yen ziphantsi koxinzelelo olukhulu lokuthengisa kwakhona namhlanje. Abatyalomali baseMelika babonakala ngathi bayakukhathalela ukunyuka okuqhubekayo kwamatyala e-coronavirus ehlabathi, agqithile uphawu lwe-40 yezigidi. Endaweni yoko, kukho ithemba elihlaziyiweyo lokuvuselela imali njengoko uSomlomo weNdlu uNancy Pelosi ethe isivumelwano sephulo sihlala sinokwenzeka. Okwangoku, i-UK kunye ne-EU ziphinda ziqhubeke neengxoxo zeBrexit.
Ngokubhekisele kwiphakheji yokunceda i-coronavirus yase-US, uSomlomo weNdlu uNancy Pelosi usete ixesha lokugqibela leeyure ezingama-48. Amathemba enkqubela phambili aphela phakathi emini e-US phakathi kwezihloko ezibonisa ukuba iiDemokhrasi zikholelwa ukuba iyantlukwano enkulu iyaqhubeka. Idola yawa ngokuchasene uninzi lwembangi zayo ezinkulu, zafumana ngokungalinganiyo ngexesha leseshoni yaseMelika.
Kwelinye icala, uqoqosho lwase China lubonise nethemba.
Nangona iimali zorhwebo zibonakala ngathi zishiyekile ngasemva njengoko i-euro neponti zezona zinamandla. Ngokobuchwephesha, ikhefu le-EUR / USD lokuchasana okuncinci kwi-1.1771 licima ixesha elifutshane le-bearish.
Ukuqwalaselwa kwakhona kugxile kukunganyangeki okuncinci kwi-1.1830 kwaye ukuphuma kuya kuphinda kubuyekeze ukuphakama kwe-1.2011. Kwangokunjalo, ikhefu lokunganyangeki kwe-1.3082 kwi-GBP / USD kwisibini kunokukhokelela ekubuyiselweni kwakhona kwe-1.3482 ephezulu. Ukuphuka kwenkxaso ye-0.9087 kwi-USD / CHF kuya kuyiphinda i-0.8998 esezantsi. Ngokufanelekileyo, ukubuyela ngokupheleleyo kwiibhere zedola kufuneka kukhatshwe kukuqhekeka kokuchasana ngo-1933.17.
I-ECB Lagarde: Kubalulekile ukuthintela iimpembelelo ezingalunganga zovuselelo
UMongameli we-ECB uChristine Lagarde uthe ukuchacha kwindyikitya yokufa ye-coronavirus Ihlala iqinisekile, ingalingani, kwaye ingaphelelanga. ” Ukwengeza, "Izithintelo ezintsha ezinxulumene ne-coronavirus okwangoku zaziswa kulo lonke elaseYurophu ziya kongeza ukungaqiniseki kweenkampani kunye namakhaya."
ULagarde wathi “Inkxaso kumgaqo-nkqubo wezemali kunye nezemali kufuneka ihlale ikho ixesha elide, kwaye 'ukunqunyulwa kweziphumo' kufanele kuthintelwe.” Ngokwahlukeneyo, ilungu leBhunga elilawulayo uKlaas Noth uthe: “Okwangoku, andiboni zinto zinokundenza ndicinge ukuba inzala iza kutshintsha kakhulu kule minyaka izayo.”
tags Brexit, Christine Lagarde, KwiDola yaseMelika, Umthetho osayilwayo waseMelika, iUSD